राजनीति « Gaunbeshi
गृहजिल्ला पुगे पछि अचानक भीम रावललाई के भयो ? ओलीलाई दिए चुनौती
काठमाडौ । नेकपा एमाले विभाजन रोक्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई लैजान सहमत भए । उनको त्यो सहमति
२८ असार, काठमाडौं । १०बुँदे सहमतिप्रति नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यो सहमतिले २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरे सरह भएको
काठमाडौ । शुक्रवार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए । तर सपथका क्रममा केही अनौठो दृष्य पनि देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ ग्रहणका क्रममा राष्ट्रपतिले दोहोर्याउन भनेका केही शब्द उच्चारण
काठमाडौं, । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छिन् । उनले आज संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा
आइसियु नपाएर बुहारीको निधन भएपछि नारायणकाजीले आक्रोश पोख्दै भने, जनता ‘मारेर कसरी बस्‍न सकेको नालायक सरकार ?
काठमाडौं । आइसियु नपाएर बुहारीको दुखद निधन भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारसँग आक्रोशित बनेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै आक्रोश पोखेका हुन् । कोरोना विरुद्धको लडाइँमा
नेपाल पक्षका सांसदको छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिन र अन्य विकल्प रोज्न आग्रह गर्दै पार्टीको विवाद संवाद गरेर मिलाउने सन्देश पठाएका थिए। बैठकमा ओलीको सन्देशबारे
आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई बाबुरामको सुझाव : सौताका रिसले पोइको नाक काटे झैं नगरौं!
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले पार्टी एकताबद्ध भएर धारा ७६ को २ अनुसार सरकार बनाउन योगदान गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई सोहीअनुसार भूमिका
काठमाडौँ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमल शाह कोरोना पुष्टि भएर १८ दिन देखि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना छन् । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै नर्भिक अस्पतालले
यसरी फेरी बलियो भए प्रधानमन्त्री ओली, अब कसैले सरकार ढा ल्न नसक्ने
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप बलियो भएका छन् । उनलाई जसपाले साथ दिने भएको छ । सरकारले जसपाको माग अनुसार १२० जना बन्दीहरुको म ुद्दा फिर्ता लिने निर्णय
ओली सरकार सं क टमा ! देउवाले एमसीसीका बारेमा प्रचण्डलाई राजी गराएपछि भयो यस्तो सहमति
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजीरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । लामो कसरत पछि दुई पार्टीबीच
काठमाडौं । सडक अनुगमनका लागी गएका सव ईन्जिनियर प्रकाश बुढा चिनिया प्रहरी को नियन्त्रणमा भौतिक पुर्बाधार
बीबीसी । अमेरिकाले अहिले सम्म लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएको छ । अमेरिकाले कोभिडका